Taariikhda dagaalkii Jeejniya (Chechnya), maxay askarta gadh weynta ahi u dhib badan yihiin? | Salaan Media
Home Wararka Taariikhda dagaalkii Jeejniya (Chechnya), maxay askarta gadh weynta ahi u dhib badan...
Taariikhda dagaalkii Jeejniya (Chechnya), maxay askarta gadh weynta ahi u dhib badan yihiin?
Sababta aan soo qaatay magac gadh weynta waxa weeye dad badan oo Shiineys ah, dalal badan iyo muslimin badan ayaa hadal haya Ciid Jeejniyanka muslimka ah.
Mar 2..12,000 “Gadh weynta ” ciidanka jeejniya ayaa isu yimid oo soo galay goobta dagaalka ee Yukreen. Madaxweynaha Jeejniya Ramzan Kadyrov ayaa ku dhawaaqay: “in Ciidankii ugu fiicnaa ayaa halkaas tagayan, waxaana qabsanaynaa Kyiv!” Hogaamiyihii guutada Azov ee Ukraine ayaa ku jawaabay: “Madaxda Jeejniyaanka!
Si niyadda loo kordhiyo, mushaarka askarta Jeejniya ayaa bishiiba la gaarsiiyay $5,000. Iyo askarta Yukreeniyaanka oo si quus ah isaga caabiyay, xitaa haddii mushaharka uu kordhay 30% intii lagu jiray dagaalka.
Waxaa la qiyaasi karaa in mustaqbalka dhow, haddii aysan jirin wadahadal nabadeed, Kyiv ay si lama filaan ah waxaa dhici karaa dagaalo dhiig badan ku daatay. Ciidamada gaarka ah ee Jejniya, ee loo yaqaan “mashiinka dilka”, ma la wareegi doonaan sida ugu dhaqsaha badan Kiev sida uu sheegay madaxweynahooda? Si aan uga jawaabno su’aashan, waa in aan marka hore fahamnaa sida ay u xooggan yihiin “Ciidanka Ka”.
Jeejniya waxay leedahay dhul 15,000 oo kiiloomitir oo laba jibbaaran oo keliya iyo dadku gaaraya 1 milyan. In kasta oo ay tahay meel yar, haddana waa albaab istiraatiiji ah oo laga soo galo Caucasus. (Caucasus waa soosaaraha ugu weyn ee saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee Ruushka).
Xilligii Midowgii Soofiyeeti, Jamhuuriyaddii Jeejniya waxay ahayd Jamhuuriyad ka tirsan Midowgii Soofiyeeti. Burburkii Midowgii Soofiyeeti ka dib, waxay ka mid noqotay Federaalka Ruushka.
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Dudayev ( waa madaxweynihii ugu horeyay ee Jeejniya) kuma qanacsanayn sida uu xaalku yahay, waxa uu bilaabay in uu awood u adeegsado in uu dhulkiisa ka fuliyo “isir sifayn”, muddo saddex sano ah, waxaa la dilay 20,000 oo Ruush ah, 40,000 oo qof oo aan Jeejniyana ahaynna ay addoomo uu noqdeen.
Ka dib markii uu si buuxda u maamulay awoodda Jeejniya, Dudayev wuxuu si hami leh ugu fidiyay dhammaan gobolka Caucasus, isagoo si tartiib tartiib ah wuxuunna u hanjabay istaraatiijiyada tamarta qaranka ee Ruushka. Sidaa darteed, dagaalkii ugu horreeyay ee Jejniya ayaa qarxay!
Bishii Disembar 1994-kii, ciidanka Ruushku waxay u soo direen 40,000 oo askari si ay Jeejniya uga soo weeraraan saddex jiho.
In ka yar laba sano, dagaalka ay bilaabeen ciidanka Ruushku wuxuu ku dhammaaday guuldarrooyin ba’an. In kasta oo la dilay hoggaamiyihii Jeejniya Mrs. Dudaaye, haddana waxaa soo gaadhay dhaawac culus!
Sida laga soo xigtay tirakoobka rasmiga ah ee Ruushka: Dhimashada ciidamada Ruushka waxay ka badan tahay 3,800, 18,000 kuwaas oo ah dhaawacyo fudud iyo dhaawacyo halis ah, iyo 1,900 ayaanna la la’yahay. Ciidamada Jeejniya waxa soo gaadhay khasaare dhan 15,000 oo qof, inkasta oo ay “dhaawacmeen” haddana laf-dhabartoodu waa ay ka baxday meesha, waynna soo noqdayn!
Sannadkii 1999-kii, Basayev, oo ahaa taliyaha ciidamada Jeejniya, ayaa hogaaminayay 5,000 oo ciidan ah si ay u qabsadaan gobolka koonfureed ee Dagestan, wuxuuna si cad ugu dhawaaqay aasaaska waxaa loogu yeero “Dagestan State”.
Arintan ayaa dab kale ku soo kordhisay dalka Ruushka oo markii horeba la daalaa dhacayay dhibaatooyin gudaha iyo dibadaba baa, madaxweyne Yeltsin aad buu u naxay, waxana uu ku dhawaaqay in uu xilka iska casilayo, Putin waxa uu si rasmi ah ka soo muuqday fagaaraha aduunka, waxana uu noqday ku simaha Madaxweynaha Ruushka.
Bilowgii markii uu xilka la wareegay Putin ayaa shaqsi ahaantiisa dul maray hawada Jeejniya isagoo wata diyaarad dagaal oo nooceedu yahay Su-27 si uu u abaalmariyo ciidamada jiidda hore ee dagaalka, waxaana uu si heersare ah u shaaciyey: “Meel kasta oo ay jabhaduhu joogaanto waannu ka dagaalami doonaan iyo meel kasta oo ay tagaan. H
Dagaalkii labaad ee Jeejniya, ciidamada Ruushku waxay lahaayeen hoggaan adag, waxayna ka barteen khibradii dagaalkii “Kosovo” ee militariga Mareykanka, iyagoo si buuxda u isticmaalay awooddooda hawada iyo tignoolajiyada, si ay u weeraraan garoomada diyaaradaha iyo bakhaarada rasaasta. Ciidamada qalabka sida ee Jejniya, saldhigyadoodi milatariga, iyo raadaar doodi dhulka ayaa lala simay weerarro xoog ah oo fog.
Sababo la xiriira xeeladahooda horumarsan, ciidamada Ruushku, ka dib markii ay burburiyeen tiro badan oo ah agabka milatariga iyo xoogagga firfircoon ee Jeejniya, waxay ahaayeen kuwo aan laga adkaan karin hawlgallada dagaalka.
Wakhtigaas, khilaaf ayaa ka dhex qarxay hoggaanka Jeejniya, sababta oo ah waxa laga saaray meesha hoggaamiyihii, Kadyrov, wuxuu hoggaamiyay 3,000 oo raggiisa gaarka ah si ay si toos ah ugu biiraan dawladda Putin.
“khaa’imiinta” ay hogaaminayaan, xaaladda Jeejniya waxay noqotay hal dhinac. Jabhadda Jeejniya waxa ay la kulantay khasaare aad u badan oo ay ku dhufatay “dadkeenna” iyo ciidammadoodi gaarka ah waxay ku biirayn Ruushka, ugu dambayntiina waxay ku qasbanaadeen inay ku dhuuntaan buuraha.
Ka dib dagaallo dhiig badan ku daatay oo bilo ah oo socday, in kasta oo ciidanka Ruushku ay heleen faa’iido buuxda, haddana ma jirin khasaare yar oo ka dhashay dagaallada waddooyinka ama ku dhifoo ka dhaqaaq ah. Tirakoobyada dagaalkaas ka dib ayaa muujinaya in ugu yaraan 3,000 oo ciidan sarsare oo Ruush ah la dhaawacay.
Ciidanka Ruushka ayaa guul weyn ka soo hooyey dagaalkii labaad ee Jeejniya, Putin-na waxa uu dhidibada u taagay haybaddiisa, magaca “Imbaraadoorka Weynd” waxa uu caan ka noqday dibadda. Sababtoo ah waxqabadkiisa “daacadnimo”, Kadyrov waxaa loo dalacsiiyay cashiriga Jeejniya dagaalka ka dib.
Kadyrov waxaa lagu dilay Grozny bishii May 2004. Kadylov yar wuxuu ku tiirsanaa dhaxalka aabihiis si uu tallaabo u qaado oo u baabi’iyo mucaaradka, wuxuuna si tartiib tartiib ah u maamulay dhammaan awoodda Jeejniya ee ku hoos noolaanshiyaha Putin. (Tani sidoo kale waa asalka xaqiiqda ah in dadku ugu yeeraan Kadylov yar “fanboy yar” Putin)
Wakhtigan xaadirka ah, jabhaddii asalka ahayd ee Jeejniya waxay u jeesteen si qurux badan waxayna noqdeen ciidamada arrimaha gudaha ee Jeejniya, kuwaas oo mas’uuliyadoodu tahay:
1. Si loo ilaaliyo nidaamka gudaha ee Jeejniya, inta badan in la hareereeyo oo la xakameeyo canaasiirtii asalka ahayd ee Jeejniya ee ku dhuumatay buuraha. Ka dib dhowr sano oo howlgalo ah, tirada jabhadda ayaa hoos uga dhacday in ka badan kun ilaa dhowr iyo toban kaliya.
2. Raac amarrada Ruushka ee ah ka qaybgalka hawlgallada gudaha ee la dagaalanka argagixisada iyo dagaallada faragelinta shisheeye.
Dagaaladii Ruushka iyo Joorjiya (oo loogu talagalay gacan ku haynta Koonfurta Ossetia), iyo dagaalka Suuriya, ciidamada gudaha ee Jeejniya ayaa ka soo muuqday.
Ka hor inta aan la qorin, waxay gubeen, dileen, dhaceen oo dhaceen, qoritaanka ka dib, waxay ka talinayeen oo ka talinayeen Jeejniya. Dhammaanba, sumcadda “Ciidanka Ka” ee Ruushka ayaa sidoo kale caan ka noqdayn.
Waxaa la dilay hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Nemtsov (ku xigeenka ra’iisul wasaare). Sidoo kale shacabka ayaa buuq iyo sawaxan ku jiray, saraakiisha ciidamada ayaa si degdeg ah u soo baxay si ay u “eedeeyaan”. Ka dib markii si miyir leh loo maareeyay ra’yiga dadweynaha, arrintu ugu dambeyntii way soo afjartay.
Maalintii shanaad ee dagaalka Ruushka iyo Yukreen, Kadyrov, Kan Jeejniya ka ah waa “nin xooggan” oo si firfircoon uga codsanayay Putin inuu dagaallamo, ugu dambeyntii wuxuu helay rabitaankiisa. Waxay shir ku yeesheen caasimadda, wxayna helayn abaal-marintiina, waxay sugi waayeen inay galaan goobta dagaalka ee Ukraine.
Sida laga soo xigtay wararkii ugu dambeeyay, cutubkan ayaa mar hore ka soo muuqday agagaarka Kyiv. Sida ay ku warantay warbaahinta, waxa ay qabsadeen saldhig milatari oo ay leeyihiin ciidamada Ukraine, waxaana ay qabsadeen hub iyo qalab badan oo ay lahaayeen ciidamada Ukraine.
Ciidamada Jeejniya ee arrimaha gudaha ma aha oo kaliya dagaalyahanno awood leh oo ka bajiya cadowga, laakiin sidoo kale waa “ciidan bahal” oo khatar ah goobta dagaalka. Xaalada Kyiv waxa ay soo gaadhay meel halis ah, aynu sugno oo aragno waxqabadka cutubkan musliminta gadhka weyn.
Ardayda Reer Somaliland Ee Wax Ka Dhigta Jamacada Jigjiga Oo Xusay 18 May